ခိုင်လုံသောမီဒီယာ အချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင်ထိန်းသိမ်းခြင်း - WITNESS Blog
 Posted on Internet Shutdowns
လက်တွေ့ကျသော အကြံပေးချက်များပါဝင်သည့်ဘလော့ဂ်စီးရီး	By Yvonne Ng
ရေးသားသူ – Yvonne Ng ပံ့ပိုးသူ – Arul Prakkash
နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ – ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်
လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၊ သုတေသနပြုသူများနှင့် သတင်းထောက်များသည် မျက်မြင်သက်သေများက ရိုက်ကူးထားသော ဦးဆုံးလက်မှတ်တမ်းများကိုအားကိုးပြီးမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်၊ အစီရင်ခံ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို အမည်တပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရသည်။ ထိုသူများက မှန်ကန်သော အချက်အလက်များပေါ်တွင် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သေချာအောင် သုံးစွဲသူများသည် အဆင့်များစွာ လုပ်ဆောင်၍ သူတို့ရရှိသော မှတ်တမ်းများကို စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုသည့် ဆောင်ရွက်ချက်သည် အချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည်။မှတ်တမ်းတင်သူတယောက်အနေဖြင့် အခြားသူများက သင့်မှတ်တမ်းကို အတည်ပြုပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရိုးရှင်းသော အချက်တချို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့မှသာ ထိုမှတ်တမ်းများသည် အချိန်မီ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်။အောက်ပါ အပိုအချက်များသည် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသောကြောင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ချက်ချင်းuploadမလုပ်နိုင်သေးရင်ထုတ်လုပ်သောရက်နဲ့နေရာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တင်ထားခြင်းသည် ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုတွင်ပြသနေသော ရက်တခုအချိန်တခုဒေသတခုရှေ့တွင် ပြသခြင်းသည် အထောက်အကူမဖြစ်ပါ
တခြားသူupload မလုပ်နိုင်ရင်လည်း မှတ်တမ်းရရှိနိုင်ချေအလုံးစုံ နည်းပါးသည့်အတွက် သင့်ဗီဒီယိုနဲ့ အတည်ပြုနိုင်သည်။
လုံခြုံရေးတင်းကြပ်လို့နေရာလွတ်မကျန်လို့အရန်ကူးစရာမရှိလို့အော်ရီဂျင်နယ်ဗီဒီယိုကိုဖုန်းကနေ ဖျက်ပစ်ဖို့ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်၊ ဖုန်းကိုလွှင့်ပစ်ရမယ်ဆိုရင် အဲဒီဗီဒီယိုရဲ့စစ်မှန်မှုကို အာမခံဖို့ ခက်မယ်၊၊
ဗီဒီယိုတခုရဲ့ အသေးစိတ်အချက်တွေကို မေ့သွားပြီး app ကလည်း မဖမ်းယူထားဘူးဆိုရင် metadataကိုအင်တာနက်မသုံးဘဲဖမ်းယူထားတယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုနောက်ပိုင်းမှသူများတွေက သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါ၊၊
အောက်ပါအသုံးဝင်မည့်အချက်အလက်များက“အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင်ခိုင်လုံသောမီဒီယာ အချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်း”ကိုကူညီပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှတ်တမ်းတွေကိုအတည်ပြုခြင်းအသုံးပြုခြင်းကို အကျယ်ချဲ့နိုင်ပါမယ်၊၊
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဗီဒီယိုတွင် ထုတ်ဖော်ခြင်းရိုက်ကူးခြင်း
သင့်ဗီဒီယိုတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်စေခြင်းဖြင့် နောင်အခါ စုံစမ်းထောက်လှမ်းသူသို့မဟုတ် သတင်းထောက်မှ အချိန်နေရာစသဖြင့် ထုတ်ဖော်ဖို့လွယ်ကူနိုင်ရန် သိသာသော မြေပြင်အမှတ်အသား၊ လမ်းအမှတ်အသား၊ လိုင်စင်နံပါတ်ပြား၊ အလံ၊ တိုင်ကပ်နာရီ၊ သတင်းစာ၏ ပထမမျက်နှာ စသည့်အချက်အလက်များပါအောင်ရိုက်ကူးသင့်သည်။သင့်ရဲ့နာမည်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ(အန္တရာယ်ကင်းသည်ဆို)အချိန်၊ရက်စွဲ၊နေရာ၊GPSနဲ့ကိုက်ညီပြောဆိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်(စာရွက်ပေါ်တွင်ချရေး၍စာရွက်ကိုထည့်သွင်းရိုက်ကူးခြင်း)ပြုပါ။အသေးစိတ်အချက်အလက်များများပါလေနောက်ပိုင်းတွင်(သင့်ကိုမသိဗီဒီယိုဘယ်နေရာကလာမှန်းမသိသော်လည်း)သုတေသနလုပ်ပြီးအတည်ပြုရန် တစုံတယောက်အတွက် လွယ်ကူလေဖြစ်သည်။“ရိုက်ကူးခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်းမျှခြင်းအတွက်အခြေခံအလေ့အကျင့်များ” တွင် ကြည့်ပါ၊၊
မှတ်တမ်းတင်သော အထူးပြုထားသော app များထဲမှ တခု ရဲ့ အခွင့်ကောင်းယူအသုံးချခြင်းဖြင့် ပိုကောင်းမွန်သော metadata သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ဖုန်းမှ ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့် အခြားသော အပိုဖော်ပြချက်အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းခွင့်ရရှိသည်။ သတိပြုရန်မှာ အင်တာနက်ပိတ်ထားချိန်တွင် အင်တာနက် သုံးစရာ မလိုသော app ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးရန်နှင့် အချက်အလက်များအား ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ သင့်တော်သောappကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ ဆိုတာကို “ဒီမှတ်တမ်းတင်appကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလား” တွင်ကြည့်ပါ၊၊
ProofMode ကိုသုံး၍ အချို့သော metadataများကို ဖမ်းယူခြင်း
ProofMode ကိုသုံး၍ အချို့သော metadataများကို ဖမ်းယူခြင်း အထူးပြုထားသောမှတ်တမ်းတင်appကို အသုံးမပြုသော်လည်း ဖြည့်စွက်အချက်အလက်များကို ဖန်တီးပြီး မှတ်ချက် မြေပုံ ဓာတ်ပုံများကို ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။အနှစ်သက်ဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာappကိုသုံးကာသင့်ဗီဒီယိုထဲရှိဖြည့်ပေါင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းထိန်းသိမ်းနိုင်သည် အဓိကကျသော ဖြည့်စွက်အချက်အလက်မှာ အချိန် ရက်စွဲ ရိုက်ကူးထားသောဖြစ်ရပ်တည်ရှိရာနေရာနှင့်တကွရိုက်ကူးသည့်အရင်းအမြစ်(ရိုက်ကူးသူ၏နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ) ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထိုအချက်metadata များကို ဗီဒီယိုထဲထည့်သွင်းခြင်း (အားလုံးကိုfolderထဲထည့် zipped) လုပ်ပြီး ထုတ်ပို့ခြင်းဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်။
အရန်သိမ်းထားခြင်း back up
ဖုန်းထဲရှိမီဒီယာများကိုbackupအရန်သိမ်းခြင်းပုံမှန်လုပ်ပါ။ သီးသန့် storageနှစ်ခုခွဲထားပါ။ ဥပမာ – On-the-Go(OTG)သို့မဟုတ်wireless thumbdriveကိုဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကွန်ပျူတာမပါဘဲဆက်နိုင်သည်။
“ဖုန်းမီဒီယာများကိုအင်တာနက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာမပါဘဲbackupအရန်သိမ်းခြင်း”တွင် အသေးစိတ်ကြည့်ပါ။ အရန်သိမ်းခြင်းဖြင့် ဖုန်းပျောက်သွား ပျက်သွားခဲ့‌သော် သင့်တွင်ဗီဒီယိုကော်ပီတခု လက်ကျန် ရှိနိုင်ကြောင်း သေချာစေလိမ့်မည်။အော်ရီဂျင်နယ်ဗီဒီယို၏ စိတ်ချရသော ကော်ပီရှိခြင်းသည် သင့်ဗီဒီယိုကို တခြားနည်းလမ်းမှမြင်သော စုံစမ်းထောက်လှမ်းသူ သို့မဟုတ် သတင်းထောက်က နောက်ပိုင်းတွင် သင့်ထံမှ တိုက်ရိုက်လာယူရန် ထောက်ကူသည်။ (သင့်ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်လာလို့ရတယ်ဆိုပါစို့)၊ တိုပြီးပြည့်စုံသောကွင်းဆက်ကို ဖန်တီးနိုင်လာမည်။
OTG or wireless thumb driveဖြင့် ဖုန်းထဲက ဖိုင်တွေကို backup အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း
“ဖုန်းမီဒီယာများကိုအင်တာနက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာမပါဘဲbackup အရန်သိမ်းခြင်း” ကို ဒီစီးရီးတွင်ကြည့်ပါ။
 Archived in Internet Shutdowns and tagged burmese, internet shutdowns.
ဖုန်းမီဒီယာများကိုအင်တာနက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာမပါဘဲbackup အရန်သိမ်းခြင်း By Yvonne Ng
ဒီမှတ်တမ်းတင် app ကို သုံးသင့်ပါသလား? By Yvonne Ng